गर्भावस्थाको बखत उत्तरीकरणियालको मोटाई के हुनुपर्दछ। गर्भावस्थाको प्रारम्भिक अवधिमा एन्डोमेट्रियमको मोटाई कस्तो हुनुपर्दछ
मोक्केनिंग एर्मियेट्रियल निम्बराल तहको तहका सबैभन्दा व्यापक रोग हुन्। कारणहरू प्रायः हार्मोनल पृष्ठभूमिको उल्लंघनको साथ सम्बन्धित छन्। प्रजनन उमेरको बिरामी यसका लागि धेरै संवेदनशील हुन्छ। यो राज्य गर्भधारण र महिला यौन प्रणालीको सामान्य कार्यको समस्याले ग्रस्त छ।
Pet2> Petwoe को विवरण
यसको मतलब के हो - यसको मतलब के हो - गर्भाशय, एटेटसको संयोजतत्वको hyperplaysia? एर्मामेट्रियमले गर्भाशयमा भित्री सतहलाई खोसदियो, र हार्मोरूो निर्भरता द्वारा भिन्नता छ। यो फल अन्डाको एट्याच्चको फलोपिया भित्ता र सफल गर्भावस्था को आपत्तिजनक छ।
सामान्य रूपमा, allometretrial गर्भाशय लेयरन तहको मोटाई5मिमीसम्म mm देखि 1 15 मिमीसम्म मोटाई। रोग विशेषज्ञ प्रक्रिया विकास गर्दा, एपेमेरेट्रियम गाढा छ। सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको मासिक धर्म चक्रको पहिलो आधामा एन्डोमेट्रियल तहको मोटाईमा बढेको छ।
किन यो हुन्छ? सामान्यतया, एस्मेमिट्रियल तहको मोटाई एक हार्मोनल प्रणाली द्वारा नियमित छ। शून्युटी बेसुरीले ओभलचेटरी अवधिमा गोलाकार, भ्रुण अवधिमा गाढा बनाउँदछ, र यदि गर्भधारणको समयमा शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ भने शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ।
जब हार्मोनल विकारहरू, प्रक्रिया भाँचिएको छ, एलमिटेट्रिक टिशू बढ्न थाल्छ। यी रक्तस्रावको सबैभन्दा बारम्बार कारणहरू, प्रजनन कार्यको विकार, पोलिप्स, ट्यूमर नेप्लामहरूको गठन र एक शोकको प्रत्याशाको प्रक्रियाको विकास पनि।
यसको नभए पनि बाक्लो संयोदायिकको उपस्थिति एक गम्भीर क्षतिपूर्ति र पर्याप्त चिकित्सा सेवा, सम्भव प्रतिकूल प्रभावबाट बच्न आवश्यक छ।
PESTOLY को विकासको जोखिम बढ्न सक्दछ, हार्मोनल कन्क्वायर, अनियन्त्रित, कार्बोहाइड्रेट र फ्याट विनिमय प्रक्रियाहरूको उल्लंघन।
गर्भावस्था र भ्रुण आकारको अवधि निर्धारित गर्न मद्दत गर्दछ
पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ
भ्रुणको विकासको लागि ट्रेस गर्न र कुनै विचलनहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ
को सेक्स निर्धारित गर्न मद्दत गर्दछ गर्भावस्था
गर्न प्रयोग गरीन्छ।:
अल्ट्रासाउन्डको नतिजा प्राप्त भएको, तपाइँ डाक्टरले लेखेकोमा चासो लिन सक्नुहुन्छ। अधिक जान्नुहोस्, जसको अर्थ मुख्य सर्तहरू उनीहरूको निष्कर्षमा लेखिएका हुन्छन्।
गर्भाशयको आकार। अल्ट्रासाउन्डमा, तपाइँले गर्भाशयको sits आकार परिभाषित गर्न सक्नुहुनेछ: ट्रान्सभर्स आकार, अनुदैर्ध्य आकार र फ्रन्ट-पछाडि आकार। अनुदैर्ध्य आकार (गर्भाशय को लम्बाई) को सामान्य मात्रा 45 45-500 मिलीएम (with0 मिमीसम्म बच्चा जन्म दिन) 45--5500 मिटर (महिलाको विवाहमा M0 मिमी), र फ्रन्ट-रियरर (गर्भाशय मोटन्स) Never-35-4545 मिलीएममा। गर्भाशयको आकारमा साना विचलन धेरै महिलामा फेला पर्दछ र रोगको बारेमा कुरा गर्दैनन्। यद्यपि धेरै ठूलो गर्भाशय आकारले गर्भाशय, एडनोमोसिलोसिस, गर्भावस्थाको बारेमा कुरा गर्न सक्छ।
Odometry संरचना। Imometry मांसपेशि, गर्भाशय को एक बाक्लो परर हो। सामान्यतया, यसको संरचना समसामनको हुनुपर्दछ। Oymometrium को inhomolgeenous संरचना Adenomyosis को बारेमा कुरा गर्न सक्छ। तर समय बिताउनु आवश्यक पर्दैन, किनकि तपाईंलाई थप परीक्षाको आवश्यकता छ भनेर स्पष्ट पार्नको लागि आवश्यक पर्दैन।
अशक्ततारिता गर्भाशयको भित्री तहको संक्रामक भत्केको रोग हो। बच्चाको लागि पर्खँदै यो रोगीता गर्भावस्थाको गर्भपातीमा गम्भीर समस्याहरूको विकासमा जान्छ। गर्भवती महिलालाई अ per ्ग्रेट्सेटी के खतरा छ?
एर्मामेट्रियल (गर्भाशयको शरम तह) - गर्भावस्थामा बकवास। यो पैतृकता पेटको फेदमा गम्भीर दुखाइको उदयको उदयको उदयको उस्तरदानको उदयको उदयको उदयको उदयको आयो। तीव्र Altomethretithithiet को साथ, शरीर तापक्रम प्रायः degrees degrees डिग्रीसम्म degrees degrees डिग्रीसम्मसम्म पुग्छ, चिसो, गर्मी, टाउको दुख्ने भावना हो। अचानक रक्तस्राव, साथै प्रशस्त रक्तस्राव, साथै प्रशस्त र दर्दनाक मासिक धर्मको रूपमा मासिक धर्म चक्रो, धेरै विशेषताहरू हुन्।
गर्भाशयको पुरानो सूचक भ्रष्टाचार एल्मामिट्रियमको गहिरो तहहरूमा क्षतिको साथ अगाडि बढ्छ। गम्भीर अवस्थाहरूमा, एक मांसपेशी तह प्रक्रियामा संलग्न हुन सक्दछ, साथै प्रतिपक्षी पातहरू। दीर्घकालीन औसत इंडिमेट्रेट प्राय: दुबै पक्षहरू र अंडाकारहरू (नमपिनाजोर) मा कटौती गर्दछ।
एलओमिटरिट को सीधा कारण विभिन्न रोगजनक र सर्त पाथोओजेनिक ब्याक्टेरिया हो। तिनीहरू मध्ये केही जीवन भर एक महिलाको शरीरमा बस्छन्, प्रतिरोधी मा एक महत्वपूर्ण कमी को साथ मात्र सक्रिय। अन्य ब्याक्टेरियाहरू असुरक्षित यौन संभोगको साथ, साथै व्यक्तिगत स्वच्छता नियमहरूको साथ गैर-अनुपालनको मामलामा हुन्छ। प्राय: अक्सर, रोगजनक सूक्ष्मजीवहरू ग्रीवा कस्ता ग्रीवा करोलबाट गर्भाशयको लामो प्रवाहको साथ गर्भाशय हुन्छ।